Te Hiaina Mandrakizay ve Ianao? Fantaro ny Lalana Mankany ary Araho
TSY hoatr’izao mihitsy ny fiainana noeritreretin’Andriamanitra ho antsika. Inona no fikasany tamin’izy namorona ny olombelona? Hoe olona manaiky ny fahefany sy manaraka ny tari-dalany ary manahaka ny toetrany no mameno ny tany. Tiany ho faly izy ireo, rehefa mitaiza ny zanany, mianatra zava-baovao, ary manova ny tany ho paradisa.
HANATANTERAKA NY FIKASANY MOMBA NY TANY ANDRIAMANITRA
“Mampitsahatra ady hatrany amin’ny faran’ny tany izy.”​—Salamo 46:9.
“Tonga ... ny fotoana handringanana izay manimba ny tany.”​—Apokalypsy 11:18.
“Tsy hisy mponina hilaza hoe: ‘Marary aho.’”​—Isaia 33:24.
“Hanaram-po amin’ny asan’ny tanany ny olom-boafidiko.”​​—Isaia 65:22.
Ahoana no hanatanterahan’Andriamanitra an’ireo? Nanendry an’i Jesosy ho Mpanjakan’ny fanjakany izy. Antsoin’ny Baiboly hoe Fanjakan’Andriamanitra izy io, ary hitondra ny tany manontolo. (Daniela 2:44) Hoy ny Baiboly momba an’i Jesosy: ‘Andriamanitra hanome azy seza fiandrianana. Ary ho mpanjaka izy.’—Lioka 1:32, 33.
Nanao fahagagana be dia be i Jesosy tamin’izy tetỳ an-tany. Hita avy amin’ireny fa ho tsara lavitra noho izao ny fiainana rehefa hitondra izy.
NASEHON’I JESOSY NY ZAVATRA HATAONY HO AN’NY OLONA MANKATÒ
Nanasitrana ny karazan’aretina rehetra izy. Nasehony tamin’izany hoe hofoanany ny aretina.​—Matio 9:35.
Nampitony ny ranomasina izy. Hita avy amin’izany hoe hahafehy ny herin’ny natiora izy, ka ho voaro ny olombelona.​—Marka 4:36-39.
Nanome sakafo ho an’ny olona an’arivony izy. Hita àry hoe hanome izay ilain’ny olona izy.​—Marka 6:41-44.
Nanova ny rano ho divay izy tamin’ny mariazy iray. Hita avy amin’izany hoe hataony izay hahatonga ny olona hankafy fiainana.​—Jaona 2:7-11.
Hoatr’izany ny fiainana homen’Andriamanitra an’ireo tia azy. Te hiaina an’izany ve ianao? Mila mandeha amin’ilay “lalana mankany amin’ny fiainana” àry ianao. Tery izy io ary vitsy no mahita azy.—Matio 7:14.
MANDEHANA AMIN’ILAY LALANA MANKANY AMIN’NY FIAINANA
Inona io lalana io? Izay rehetra asain’Andriamanitra ataontsika izy io. Hoy izy ao amin’ny Isaia 48:17: “Izaho Jehovah no Andriamanitrao, Ilay mampianatra anao mba hahitanao soa, Ilay mampandeha anao amin’ny lalana tokony halehanao.” Ny mandeha amin’io lalana io no tena mahasambatra indrindra.
Hoy i Jesosy: “Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana.” (Jaona 14:6) Hifandray tsara amin’Andriamanitra isika, raha mino an’ireo zavatra nampianarin’i Jesosy sady miezaka manahaka azy. Hihatsara koa ny fiainantsika.
Ahoana no hahitanao azy io? Be dia be izao ny fivavahana. Nampitandrina anefa i Jesosy hoe: “Tsy izay rehetra milaza amiko hoe: ‘Tompo ô, Tompo ô’, no hiditra ao amin’ny fanjakan’ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon’ny Raiko izay any an-danitra.” (Matio 7:21) Hoy koa izy: “Ny voa izay vokariny no hahafantaranareo tsara azy ireny.” (Matio 7:16) Afaka manampy anao hamantatra ny fivavahana marina ny Baiboly.—Jaona 17:17.
Inona no tokony hataonao raha te handeha amin’izy io ianao? Mila fantarinao hoe: Iza ilay nanome fiainana antsika? Iza ny anarany? Hoatran’ny ahoana ny toetrany? Inona no ataony ho antsika? Ary inona no tiany hataontsika? *
Rehefa namorona antsika Andriamanitra, dia tiany hahafantatra azy sy ho lasa namany isika, fa tsy hoe hiasa, hisakafo, hilalao, ary hamelona ankohonana fotsiny. Hasehontsika hoe tiantsika izy raha manao ny sitrapony isika. Hoy i Jesosy: “Mba hahazoan’izy ireo fiainana mandrakizay, dia ilainy ny mianatra hahalala anao, ilay hany tena Andriamanitra.”—Jaona 17:3.
AMPIANARIN’ANDRIAMANITRA AO AMIN’NY BAIBOLY IZAY TOKONY HATAONTSIKA MBA ‘HAHITANTSIKA SOA.’—ISAIA 48:17
ATAOVY NY DINGANA VOALOHANY
Mety hila hanova zavatra sasany eo amin’ny fiainanao ianao, rehefa mahalala an’izay tian’Andriamanitra hataonao. Mety ho sarotra be aminao izany. Tena ho sambatra anefa ianao raha mandeha amin’ilay lalana mankany amin’ny fiainana. Mila manao ny dingana voalohany fotsiny ianao. Afaka mampianatra Baiboly anao ny Vavolombelon’i Jehovah. Ho hitanao amin’izany ny valin’ny fanontaniana sasany momba an’Andriamanitra. Tsy andoavam-bola io fianarana io, ary azo atao amin’ny fotoana sy toerana mety aminao. Afaka miresaka aminay mivantana ianao, na miditra ao amin’ny tranonkalanay www.jw.org/mg.
^ feh. 20 Jereo Ny Tilikambo Fiambenana No. 1 2019.
Fiainana & Fahafatesana
Hizara Hizara Inona no Tokony Hataonao Raha Te Hiaina Mandrakizay Ianao?